Nhau - Restaurant Project YeZuva Master Furniture Mugadziri
Restaurant Project YeZuva Master Tarenda Mugadziri
Sun Master haisi chete OEM yekunze fanicha inogadzira ine makore anopfuura makumi maviri 'ruzivo rwegadheni fenicha mugadziri uye cafe chigaro mutengesi, asi hunyanzvi dhizaini fekitori inoramba ichitangisa anopfuura makumi matatu mamodheru mwaka wega wega. Isu takasarudzika muzvigaro zvepatio armrest ine kuruka wicker, tambo fenicha yekunze, uye machira epanze fenicha ine aluminium poda yakavharwa mafuremu uye mafuremu esimbi akasungirirwa nemhando dzakasiyana dzezvinhu senge mapurasitiki huni uye teak huni
Nebudiriro yepamusoro yeiyo Catering indasitiri, kunakidzwa yakanyudzwa nharaunda nharaunda inotora iko kwekutanga kunze kwechikafu chinonaka. Chero chero rudzi rwekuchinja uye hunyanzvi hune chinangwa chekuvandudza zvinonakidza zvevatengi ruzivo, kuitira kuti vaunze vanhu vazhinji kuti vauye pamusoro vawane imwe purofiti. Izvo zvinozivikanwa zvese zvemukati dhizaini uye yekuvandudza mamiriro ekunze anoshanda akatenderedza vatengi 'zvido, ichivapa iwo akanakisa mhando neakanakisa sevhisi. Panguva yese iyi maitiro, fenicha inoisa yakakosha basa kusvika kuvanhu, sekunge fanicha yekunze.
Nekuwedzera kuri kukura kwehupfumi, vanhu havana hanya nekuwana chikafu chakaringana. Pane kudaro, vanhu vari kutarisira kunakidzwa nekicheni yakanaka uye akasiyana ruzivo vachiri kutora chikafu. Kuratidzira maringe neresitorendi kuti inakidzwe nekudya zvinoita kunge hunyanzvi hweanogadzira resitorendi anokwanisa. Dhizaini dhizaini inoshandura dzakasiyana siyana, zvese zvekunze fanicha uye yekudyira fenicha zvakasiyana zvinoenderana. Nekudaro, isu patinoita chirongwa, dhizaini inofanirwa kutariswa: fenicha, nzvimbo yekunze uye dhizaini yemukati. Ngatidzokerei kuita. Kusimudza chair chaiyo maresitorendi nematafura zvinogona kuwedzera maitiro ekuona.
Maitiro ekugadzira yakanaka yekudyira dhizaini, kuzadzisa izvo zvinodiwa kubva kumutengi, uchifunga kubva kwavo maonero, kugadzira iyo chidhori uye chiratidzo chenzvimbo chakabatana. Munguva pfupi, nzvimbo yekudyira inozivikanwa haisi yezvekudya chete, asiwo yeaesthetics. Pano, tave kuzokurukura fenicha yekunze, mhando dzewicker armrest yekuburitsa zvigaro zvakazara.
Iyo nzvimbo yakakosha. Mukuru webasa anogona kuve nekunzwisisa kwakajeka kwerumwe rudzi rweresitorendi. Iri boka rinodya, danho rekushandisa uye kuti raizodhura zvakadii.
Ipo nzvimbo ichiongororwa, kuita ongororo yakanangana nemutengi kwakakosha. Hunhu hwekuuya kwevatengi, huwandu hwevashanyi vese vanobatsirwa kugadzira iyo yekudyira tsika. Ndokureva, sekureba sekunge isu tine nzwisiso yakajeka yeedu vatengi vatengi, isu tinofanirwa kusarudza dhizaini yemukati zvinoenderana nenzira yavo yekufarira. Mune mamwe mazwi, zvigaro zvekudyira nematafura eresitorendi ndiyo kiyi yekugadzira basa uye kutaridzika zvakanaka.
Basa reresitorendi rinogadzirwa nemidziyo. Iyo fenicha yekunze inogonesa vatengi kunakidzwa nekunze kwenzvimbo nezuva, mhepo yakachena. Pano, chii chiri musimboti weresitorendi? Inonaka, hongu. Nharaunda yakanaka inowedzera ruzivo, hapana muviri unoramba nzvimbo inofadza, inotonhorera nekutandara.
Iyi purojekiti iri muTaikoohui Shopping mall, iyo yakagadzirirwa neyakavakirwa pasirese Arquitectonica. Zuva Tenzi vanoziva zvinodiwa nevatengi uye vachipa rutsigiro ruzere uchipa iyo yemukati neyekunze fenicha seyakagadzika chigaro chigadziri uye mupurasitiki wehuni tafura mupi
Mune ino purojekiti, fanicha yekunze inoda kujairana nenzvimbo yekunze, zvichibva pane zvakagadziriswa izvo zvinochengeta bharanzi pakati pekunze fenicha uye dhizaini yemukati. Macheya eresitorendi anogona zvakare kushandiswa kuhotera, bhawa, shopu yekofi, kunakidzwa kwakasiyana siyana kwekushandisa.
Nakidzwa nekupenya kwezuva, nakirwa nechikafu chakanaka, pamwe nebasa rinonakidza kubva kuSun Master fenicha yekunze.